သင်၏အကြွေးဝယ်ကဒ်အချက်အလက်ကို Safari တွင်ထည့်ပါ ငါက Mac ပါ
သင်၏အကြွေးဝယ်ကတ်အချက်အလက်ကို Safari တွင်ထည့်ပါ
Safari တွင်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သည့်ရွေးစရာများထဲမှတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့၏အဆက်အသွယ်ကဒ်၊ အသုံးပြုသူအမည်နှင့်စကားဝှက်ကဲ့သို့သောအချက်အလက်အချို့ကိုအလိုအလျောက်ဖြည့်စွက်ရန်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြွေးဝယ်ကဒ်ဒေတာများကိုပင်သိမ်းဆည်းထားရန်ဖြစ်သည်။ ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကဒ်ဒေတာကို Mac တွင်သိမ်းဆည်းထားခြင်းသည်ထူးဆန်းနေနိုင်သည်သို့မဟုတ်အနည်းငယ်တွန့်ဆုတ်နေနိုင်သည် ဒါကတကယ်လုံခြုံပြီးကျွန်တော်တို့မှာဘာပြproblemsနာမှမရှိဘူး.
ရှင်းနေသည်မှာအွန်လိုင်းဝယ်ယူမှုများသည်ပိုမိုစံချိန်စံညွှန်းများဖြစ်လာသည်နှင့်အနည်းငယ်သာအသုံးပြုသူများသည်ဤ ၀ ယ်ယူမှုများအားကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုဖယ်ရှားပစ်လိုက်သည်မှာရှင်းနေပါသည်။ ကွန်ယက်တွင်၎င်းကိုအသုံးပြုရန်လွယ်ကူသောငွေပေးချေမှုပုံစံများလည်းရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သေချာသည် အသုံးပြုသူများအများစုအွန်လိုင်းဝယ်ယူကြပါပြီ.
အွန်လိုင်းဝယ်ယူမှုသို့မဟုတ်ငွေပေးချေမှုအကြောင်းပြောသောအခါအကြွေးဝယ်ကတ်ပြားလိုအပ်သည်။ Mac အတွက် Safari ကကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုတစ်ခုပေးထားတယ် ကျွန်ုပ်တို့၏အကြွေးဝယ်ကဒ်၏အချက်အလက်များကိုသိမ်းဆည်းပါ OS X 10.9 (သို့) ထိုထက်ပိုသောကြောင့်အွန်လိုင်းအွန်လိုင်း ၀ ယ်ယူသောအခါကဒ်နံပါတ်ကိုထည့်ရန်မလိုအပ်တော့ပါ။ ဝယ်ယူမှုကိုပြုလုပ်ရန်ပိုမိုမြန်ဆန်လိမ့်မည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်နှင့် ဒီအဆာနည်းလမ်း၏လုံခြုံမှုကိုမီးမောင်းထိုးပြ၀ ယ်ယူသည့်အချိန်တွင်အချက်အလက်များကိုအလိုအလျောက်ဖြည့်လိုသည်ဖြစ်စေ၊ မ ၀ ယ်သည်ဖြစ်စေလက်ခံရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ ယ်ယူခြင်းတွင်အလိုအလျောက်ဖြည့်စွက်ရန်အမြဲတမ်းရွေးချယ်စရာမလိုဘဲ ၀ င်းဒိုးပေါ်လာလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့ Safari Autofill တွင်သိမ်းထားသောကွဲပြားသောကဒ်များကိုရွေး။ ၎င်းသည်မလုံခြုံပါက၊ လုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်များအတွက်၊ ခရက်ဒစ်ကဒ်လုံခြုံရေးကုဒ်ကိုမသိမ်းဆည်းပါ၊ ဤနည်းအားဖြင့် ၀ ယ်သူသည် ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုစီကိုလက်ဖြင့်ထည့်သွင်းရန်တောင်းဆိုသောကြောင့် ၀ ယ်ယူခြင်းလုပ်ဆောင်သည့်အခါလုံခြုံရေးအပေါင်းရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကဒ်အပြောင်းအလဲရှိလျှင်သို့မဟုတ်အသစ်တစ်ခုကိုဖျက်လိုခြင်းသို့မဟုတ်အသစ်ထည့်ခြင်းပြုလုပ်လိုပါက၎င်းကိုတိုက်ရိုက်ရိုက်ထည့်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည် Safari က> Preferences> Auto Fill နှင့်ရွေးချယ်ခြင်း Edit option အကြွေးဝယ်ကတ်ပြားပေါ်မှာ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » လဲ tutorial » သင်၏အကြွေးဝယ်ကတ်အချက်အလက်ကို Safari တွင်ထည့်ပါ
သင်၏ iPhone တွင်ဓါတ်ပုံများကိုတည်းဖြတ်ရန်အကောင်းဆုံးအက်ပ်များ
“ Meme vs Rage” သည် Mac App Store တွင်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာဖြစ်သည်